अन्त्यमा देउवा–प्रचण्डको निश्कर्ष : यो चुनावमा ओलीलाई ज्ञानेन्द्रको समर्थन ! | NepalDainik
अन्त्यमा देउवा–प्रचण्डको निश्कर्ष : यो चुनावमा ओलीलाई ज्ञानेन्द्रको समर्थन !
काठमाडौं, । स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचनको मतपरिणाम सार्वजनिक करिब–करिब सम्पन्न भैसकेको छ । पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि पहिलो भएको एमाले दोस्रो चरणको निर्वाचनमा पनि पहिलो नै हुने भएको छ ।
कमल थापाप्रति अबिश्वास भएका बेला पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको केपी ओली प्रति विश्वास तथा भरोसा
निर्वाचनको मतपरिणाम सार्वजनिक भैरहेको अवस्थामा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सभापति एवम् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सत्तासाझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डवीच आज समिक्षा भएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमाले पहिलो बन्नुको प्रमुख कारण नै एमालेलाई पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको समर्थन हुनु रहेको देउवा र प्रचण्डको निश्कर्ष रहेको छ ।
पछिल्लो समय राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाप्रति पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको कुनैपनि किसिमको विश्वास तथा भरोसा नरहेको उच्च स्रोतको दाबी छ । शाहले एमालेलाई नै समर्थन गर्न आफ्नो तर्फबाट हरप्रयास गरेको सत्तारुढ दल कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको ठम्याई र आरोप छ ।
२० वर्षपछि भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा आम जनताहरुले उत्साहजनकपूर्वक रुपमा मतदानमा भाग लिएका थिए । पहिलो चरणमा ७४ प्रतिशत मत खसेको थियो भने दोस्रो चरणमा पनि ७४ प्रतिशतकै हाराहारीमा मत खसेको थियो । सहदेखि गाउँसम्म पनि निर्वाचनको उल्लासमय वातावरण बनेको थियो । देउवा र प्रचण्डको अहिलेको निश्कर्ष भनेको सहरदेखि गाउँसम्मको दरबारीया भोट एमालेलाई गएको भन्ने छ । रिर्पोटर्स नेपालमा समाचार छ । (सुचनाकेन्द्र बाट)
Posted by Becoming Kishor at 7:16 PM
No Comment to " अन्त्यमा देउवा–प्रचण्डको निश्कर्ष : यो चुनावमा ओलीलाई ज्ञानेन्द्रको समर्थन ! "